Saddex Waqti ka fogoow kulanka sariirta - Aayaha
Waxaa jira waqti loo baahanyahay inaad iska ilaaliso inaad gasho kulanka sariirta ama laguu galmoodo sababo caafimaad darteed.
Akhriso 3 waqti oo ay tahay inaadan galin kulanka sariirta.
Markaad qabtid nabraha kasoo baxa xubinta taranka (yeast infections)
Infekshinada ama nabraha kasoo baxa qaaxada ama gudaha xubinta taranka waa kuwo dhibaato u geysta haweenka. Haddii ay xubinta taranka kaaga yaalaan nabrahaas in laguu galmoodo waxay uga sii darayaan xaaladda. Waxaa wanaagsan inaad sugtid illaa aad si buuxdo uga soo kabato.
Marka lagaa daaweynayo cudurada galmada lagu kala qaado
Haddii mid idinka mid ah uu qabo cudur galmada lagu kala qaado (Infection) sida jabtada waa inaad ka fogaataa galmada. Haddii kale waxaad qaadsiineysaa lamaantaada, cuduradaas noocaas markaad qabtid waxaa wanaagsan inaad ka fogaatid galmada inta aad si buuxdo uga bogsaneyso.
Haddii uu noqon lahaa qalliinka dhalmada ama kan haweenka lagu sameeyo marka ay dhalayaan iyo qaliimada kale ee lagu sameeyo caloosha, waxaad u baahantahay inaad iska ilaaliso galmada illaa aad ka bogsato. Inaad hore galmo ka gasho ama aad ku deg degto kadib qalliinka dhibaato ayay kuu keeneysaa waxayna sababeysaa dhiig bax kugu yimaada oo uga sii daraya dhaawaca.
Sug illaa dhaqtarka uu kaaga fasaxo galmada si aad uga bad baado dhibaatooyin kugu yimaada.